नेपाली बालसाहित्यका विभिन्न कृतिहरु मराठी भाषामा प्रकाशित
विभिन्न नेपाली बालसाहित्य लेखकका बालकथाका कृतिहरु मराठी भाषामा प्रकाशित भएको खबर प्राप्त भएको छ । यी कृति भारतको पुनेमा रहेको स्पर्श प्रकाशनले प्रकाशित गरेको हो ।
एक्लै गौशालाबाट चावहिल आउन डराउँथेँ
प्रा. डा. अच्युतमणि आचार्य वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ हुन् । उनी समाजसेवाका क्षेत्रमा पनि सक्रिय छन् । आचार्यले बालहितकारी, चिकित्सा, शिक्षा र धार्मिक अनुष्ठानहरुमा उत्कृष्ट प्रतिभाहरुलाई पुरस्कृत गर्न विभिन्न पुरस्कारहरुको पनि स्थापना गरेका छन् । दुःखी गरीब बालबालिकाहरुलाई विभिन्न अनाथालमा गई निशुल्क उपचार गरिदिने र औषधीसमेत सहयोग गर्ने डा. आचार्य चिकित्सा क्षेत्रका आदरणीय व्यक्तित्व हुन् । यस अंकमा डा. आचार्यसँग उनको बाल्यकालका बारेमा कुराकानी गरेका छौं । उनी आफ्नो बाल्यकाल यसरी सनाउँछन् ः
आज नानी कता जान्छे
बुबुमाम सबै आफैं खान्छे
भोलि नानी अलि ठूली हुन्छे
पुस्तक च्यापी पढ्न जान्छे ।
टाईम्स ईन्टरनेशनल मन्टेश्वरी स्कुलका विद्यार्थीले रेड डे मनाए
सितापाईलास्थित टाईम्स ईन्टरनेशनल मन्टेश्वरी स्कुलका विद्यार्थी र शिक्षिकाले तीज मनाएका छन् । तीजका अवसरमा सबै महिला रातो पहिरनमा देखिने भएकाले कार्यक्रमलाई रेड डे अर्थात रातो दिन नाम दिइएको थियो । कार्यक्रममा सबै विद्यार्थी एवं शिक्षिकाले रातो पहिरन लगाएर नाचगान गरेका थिए ।
— ललिता दोषी
सेतो लौरी हातमा छ
पीठमा ठूलो झोला
छामछाम छुमछुम गर्दै आइन्
सानैदेखि हाम्रो मन भाच्न नखोज
— प्रभा भट्टराई
सानैदेखि हाम्रो मन भाँच्न नखोज
हामीलाई पैसासँग साट्न नखोज
चाँहिदैन सुन चाँदी सम्पत्तीको धारो
हामीलाई पैसाभन्दा बाबाआमा प्यारो ।